Oovimba bokulima-Ilungelo laseMelika lokwazi
"Izifundo ezininzi ze-epidemiological kunye nezilwanyana zidibanise i-paraquat nesifo sika-Parkinson," kusho uDorsey Ray, uprofesa we-neurology kunye nomlawuli we-Centre for Human Experimental Therapeutics kwiYunivesithi yaseRochester eNew York. UDorsey ukwangumbhali we incwadi malunga nokuthintela kunye nokunyanga isifo sikaParkinson.
Uphononongo lwase-US lubonisa ukutshintshela kukutya okune-organic kunokukhawuleza kucace ukubulala izitshabalalisi kwimizimba yethu
ezaposwa ngomhla Agasti 11, 2020 by UCarey Gillam
Isifundo esitsha epapashwe ngoLwesibini ifumanise ukuba emva kokutshintshela kukutya okune-organic kwiintsuku nje ezimbalwa, abantu banokuwanciphisa amanqanaba esibulali-zinambuzane esihambelana nomhlaza ofunyenwe kumchamo wabo ngaphezulu kwama-70 epesenti.
Abaphandi baqokelela iisampulu zomchamo ezili-158 eziphuma kwiintsapho ezine –abadala abasixhenxe nabantwana abasithoba - kwaye bavavanya iisampulu zobukho bokubulala ukhula glyphosate, nesisithako esisebenzayo kwiRoundup kunye neminye imichiza yokutshabalalisa ukhula ethandwayo. Abathathi-nxaxheba bachitha iintsuku ezintlanu kukutya okungekho organic ngokupheleleyo kunye neentsuku ezintlanu kukutya okune-organic ngokupheleleyo.
"Olu phononongo lubonisa ukuba ukutshintshela kwindlela yokutya eyi-organic yindlela efanelekileyo yokunciphisa umthwalo we-glyphosate… Olu phando longeza kumzimba okhulayo woncwadi obonisa ukuba ukutya okunezinto eziphilayo kunokunciphisa ukubekeka kwizibulali zinambuzane kubantwana nakubantu abadala," utshilo. isifundo, esapapashwa kwijenali UPhando lwezeNdalo.
Ngokukodwa, abaphandi bafumanise ukuba abantwana abakwisifundo banamanqanaba aphezulu kakhulu e-glyphosate kumchamo wabo kunabantu abadala. Bobabini abantu abadala kunye nabantwana babone amathontsi amakhulu phambi kwesiyobisi sokubulala izitshabalalisi kulandela ukutshintsha kokutya. Amanqanaba okuchama e-urinary glyphosate kuzo zonke izifundo ehle ngepesenti ye-70.93.
Ngaphandle kobukhulu bayo obuncinci, olu phononongo lubalulekile kuba lubonisa ukuba abantu banokunciphisa ukubhengeza kwabo ukubulala izitshabalalisi ekutyeni nangaphandle komthetho, utshilo uBruce Lanphear, uNjingalwazi weSayensi yezeMpilo kwiYunivesithi yaseSimon Fraser.
U-Lanphear uqaphele ukuba isifundo sibonisa ukuba abantwana babonakala bevezwe kakhulu kunabantu abadala, nangona isizathu singacacanga. "Ukuba ukutya kungcoliswe zizibulali zinambuzane, baya kuba nomthwalo ophezulu emzimbeni," utshilo uLanphear.
I-Roundup kunye nezinye i-glyphosate herbicides zihlala zitshizwa ngqo ngaphezulu kwamasimi okulima umbona, iimbotyi zesoya, isweet beet, icanola, ingqolowa, ihabile kunye nezinye izityalo ezininzi ezisetyenziselwa ukwenza ukutya, kushiya umkhondo kwimveliso yokutya egqityiweyo etyiwe ngabantu nezilwanyana.
Ulawulo lokutya kunye neziyobisi lufumene i-glyphosate nkqu kwi-oatmeal kwaye sithandwa, phakathi kwezinye iimveliso. Kwaye amaqela abathengi anamaxwebhu ashiyekileyo e-glyphosate kuluhlu lwamashwamshwam kunye nokutya okuziinkozo.
Kodwa i-glyphosate kunye ne-glyphosate-based herbicides enje ngeRoundup inxulunyaniswe nomhlaza kunye nokunye ukugula kunye nezifo kwizifundo ezininzi kule minyaka kunye nokwanda kolwazi lophando kukhokelele ekukhuleni koloyiko malunga nokuchazwa kwichiza lokubulala izitshabalalisi ngokutya.
Amaqela amaninzi abhale ubukho be-glyphosate kumchamo womntu kule minyaka idlulileyo. Kodwa bekukho izifundo ezimbalwa ngokuthelekisa amanqanaba e-glyphosate kubantu abatya ukutya okuqhelekileyo xa kuthelekiswa nokutya okwenziwe kuphela kukutya okulinywe ngokwendalo, ngaphandle kokusebenzisa izitshabalalisi ezifana ne-glyphosate.
"Iziphumo zolu phando ziqinisekisa uphando lwangaphambili apho izidlo eziphilayo zinokunciphisa ukungena kwe-agrochemicals, njenge-glyphosate," utshilo uChensheng Lu, unjingalwazi odibeneyo weSikolo seYunivesithi yaseWashington seMpilo kaRhulumente kunye noprofesa wokuhlonipha, kwiYunivesithi yase Mzantsi-ntshona, eChongqing China .
Ngokoluvo lwam, umyalezo osisiseko weli phepha kukukhuthaza ukuvelisa ukutya okuninzi okungafunekiyo kwabantu abafuna ukuzikhusela ekuvezweni ziiagrochemicals. Eli phepha liyingqinile kwakhona le ndlela ichanekileyo yokuthintela kunye nokukhusela, ”utshilo uLu.
Isifundo yabhalwa nguJohn Fagan noLarry Bohlen, bobabini iZiko loPhando ngezeMpilo e-Iowa, kunye no-Sharyle Patton, umlawuli we-Commonweal Biomonitoring Resource Centre eCalifornia no-Kendra Klein, isazinzulu sabasebenzi kwi-Friends of the Earth, iqela elikhuthaza abathengi.
The Iintsapho ezithatha inxaxheba Kwisifundo bahlala e-Oakland, California, Minneapolis, Minnesota, Baltimore, Maryland nase-Atlanta, Georgia.
Isifundo sesibini seprojekthi enamacandelo amabini ophando. Eyokuqala, amanqanaba e-14 yezibulali zinambuzane ezahlukileyo alinganiswa kumchamo wabathathi-nxaxheba.
IGlyphosate yeyona nto ixhalabisayo kuba sesona sibulala ntsholongwane sisetyenziswa kakhulu emhlabeni kwaye sitshizwa kwizityalo ezininzi zokutya. I-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza, eyinxalenye ye-World Health Organisation, ithe ngo-2015 olo phando lubonakalise i-glyphosate to unokuba ngumhlaza womntu onokwenzeka.
Amashumi amawaka abantu baye bamangalela iMonsanto besithi ukuboniswa kwi-Roundup kubangele ukuba baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma, kwaye amazwe amaninzi kunye neendawo kwihlabathi liphela kutshanje ziye zathintela okanye zathintela i-glyphosate herbicides okanye bacinga ukwenza njalo.
I-Bayer, eyathenga iMonsanto kwi-2018, yiyo ukuzama ukuhlala ngaphezu kwama-100,000 amabango anjalo aziswa eMelika. Abamangali kwizimangalo zelizwe lonke bathi iMonsanto kudala ifuna ukufihla umngcipheko weyeza layo.
Ukutya kwengqondo Bayer, umhlaza, cereal, Commonweal, ukutya, isifo, indawo, zolimo, ukutya, Abahlobo bomhlaba, glyphosate, impilo, IZiko loPhando ngezeMpilo, uju, IMonsanto, inambuzane, iintsalela, Yisonge yonke, Kutywala, umchamo
Abanye babamangali baseMelika basilele ekusayineni isivumelwano sokuhlala eBayer; I-160,000 yeedola zokuhlawula
ezaposwa ngomhla Julayi 30, 2020 by UCarey Gillam
Abamangali kwi-US Roundup litigation baqala ukufunda iinkcukacha zento Bayer AG's $ 10 yezigidigidi ukuhlawulwa kwamabango omhlaza okunene kuthetha kubo ngokwahlukeneyo, kwaye abanye abayithandi into abayibonayo.
Bayer yatsho ngasekupheleni kukaJuni Kuthethathethwane ngokuhlala kunye neenkampani ezininzi zabammangali kwisivumelwano esiza kuvala ngokufanelekileyo isambuku semali engaphezulu kwe-100,000 esalindelwe ngokuchasene neMonsanto, eyathengwa yiBayer ngo-2018. Ukuvezwa kukaMonsanto's Roundup kunye namanye amayeza okubulala ukhula enziwe ngekhemikhali ebizwa ngokuba yi-glyphosate, kwaye iMonsanto yagubungela umngcipheko.
Ngelixa isivumelwano ekuqaleni sasibonakala njengeendaba ezimnandi kubamangali-abanye abanengxaki yokunyanga umhlaza kunye nabanye abammangalela abatshatileyo abaswelekileyo- uninzi lufumanisa ukuba lunokuphela lungenamali, kuxhomekeke kuluhlu izinto. Iifemu zamagqwetha, nangona kunjalo, zinokufaka ipokotho kumakhulu ezigidi zeedola.
“Yimpumelelo kumashishini ezomthetho kunye nempama ebusweni babantu abonzakeleyo” utshilo omnye ummangali, ongafunanga kuchazwa ngegama.
Abamangali baxelelwa ukuba kufuneka bathathe isigqibo kwezi veki zimbalwa zizayo ukuba bazokwamkela indawo yokuhlala, nangona bengazi ukuba bazakuhlawulwa malini kude kube kamva. Zonke iintengiselwano zentengiselwano ziyalela abamangali ukuba bangathethi esidlangalaleni malunga neenkcukacha, bebasongela ngesohlwayo ukuba baxoxa ngokuhlala kunye nabani na ngaphandle "kwamalungu osapho asondeleyo" okanye umcebisi wezezimali.
Oku kubacaphukisile abanye abathi bacinga ukwala iindawo zokuhlala ngenjongo yokufuna ezinye iinkampani zomthetho ukuba zijongane namabango abo. Le ntatheli iwajongisisile amaxwebhu athunyelwe kubamangali abaninzi.
Kwabo bavumayo, iintlawulo zinokwenziwa kwangoko ngoFebruwari, nangona inkqubo yokuhlawula bonke abamangali kulindeleke ukuba yolule unyaka okanye nangaphezulu. Ezonxibelelwano ezithunyelwe zivela kumafemu ezomthetho ziye kubathengi bazo beRoundup zizo zombini inkqubo yomntu ngamnye ohlaselwe ngumhlaza kuya kufuneka ehambile ukuze afumane intlawulo yemali kunye nokuba ezo ntlawulo zinokufikelela phi. Imigaqo yeentengiselwano iyahluka kumzi-mveliso wamagqwetha, oko kuthetha ukuba abamangali abemi ngokufanayo banokuphelela kwiindawo zokuhlala ezahlukeneyo.
Esinye sezivumelwano ezinamandla kubonakala ngathi sisinye ekuxoxiswene ngaso Ifemi yeMiller, Kwaye ke kuyadanisa abanye babaxhasi benkampani. Ekunxibelelaneni nabathengi, inkampani yathi ikwazile ukuxoxa malunga ne-849 yezigidi zeedola ukusuka eBayer ukugubungela amabango abathengi abangaphezulu kwe-5,000 Roundup. Ifemi iqikelela ixabiso lokuhlawula umtyali ngamnye kumyinge wama- $ 160,000. Elo xabiso lipheleleyo liya kuncitshiswa ngokuncitshiswa kweefizi zamagqwetha kunye neendleko.
Nangona iifizi zamagqwetha zinokwahluka ngokuqina kunye nommangali, uninzi kwityala leRoundup lihlawulisa iipesenti ezingama-30-40 kwimirhumo engxamisekileyo.
Ukuze bakulungele ukuhlala, abamangali kufuneka babe neerekhodi zonyango ezixhasa ukuxilongwa kweentlobo ezithile ze-non-Hodgkin lymphoma kwaye bakwazi ukubonisa ukuba bavezwa ubuncinci unyaka ngaphambi kokuba bafumane isifo.
I-Firm yaseMiller ibiphambili kwityala leRoundup ukusukela ekuqaleni, ifumana uninzi lwamaxwebhu agwenxa angaphakathi eMonsanto ancede aphumelela kuzo zontathu izilingo zeRoundup ezibanjiweyo ukuza kuthi ga ngoku. IMiller Firm iphathe ezibini kwezo zilingo, isizisa amagqwetha avela kwinkampani yaseLos Angeles yaseBaum Hedlund Aristei & Goldman ukunceda kwityala UDewayne "Lee" Johnson emva kokuba umsunguli weMiller Firm uMike Miller enzakaliswe kabuhlungu kwingozi kanye phambi kwetyala. Ezi femu zimbini zisebenze kunye ekuphumeleleni ityala labamangali bendoda nomfazi, Alva kunye neAlberta Pilliod. UJohnson wanikwa i-289 yezigidi zeedola kwaye ii-Pilliods zanikwa ngaphezulu kwe- $ 2 yezigidigidi nangona iijaji zetyala kwityala ngalinye zathoba amabhaso.
Kwangoko kulenyanga, inkundla yezibheno eCalifornia wenqaba umzamo kaMonsanto ukuguqula isigwebo sikaJohnson, elawula ukuba kukho ubungqina "obuninzi" bokuba iimveliso zeRoundup zibangele umhlaza kaJohnson kodwa zinciphisa ibhaso likaJohnson ukuya kwizigidi ezingama- $ 20.5. Izibheno zisalindelwe kwezinye izigwebo ezibini ezichasene neMonsanto.
Ukufumana amanqaku kwabamangali
Ukufumanisa ukuba ngakanani na ummangali ngamnye afumana ukusuka ekuhlaleni kunye neBayer, umlawuli weqela lesithathu uya kunika amanqaku umntu ngamnye esebenzisa izinto ezibandakanya uhlobo lwe-non-Hodgkin lymphoma kummangali ngamnye ophuhlileyo; ubudala bommangali ekuchongeni isifo; ubuzaza bomhlaza womntu kunye nobungakanani bonyango abalunyamezeleyo; ezinye izinto ezinobungozi; kunye nenani lokuvezwa kwabo kwiMonsanto herbicides.
Inye into yokuhlaliswa kwabantu ebambe uninzi lwabamangali bengafundanga yayikukufunda ukuba abo ekugqibeleni bafumana imali eBayer kuya kufuneka basebenzise imali yabo ukubuyisa inxenye yeendleko zonyango lwabo lomhlaza olwalugutyungelwe yiMedicare okanye i-inshurensi yabucala. Ngonyango oluthile lomhlaza oluya kumakhulu amawaka kunye nakwizigidi zeedola, oko kunokucima ngokukhawuleza intlawulo yommangali. Iifemu zomthetho zidwelise iikontraka zomntu wesithathu eziza kuthetha-thethana nabanikezeli ngeinshurensi ukuba bafune imbuyekezo ngezaphulelo, baxelelwa. Ngokwesiqhelo kolu hlobo lokumangalelwa ngobuninzi, loo malungelo onyango angancitshiswa kakhulu, utshilo iifemu zomthetho.
Kwicala elinye lesivumelwano esamkelweyo ngummangali, iindawo zokuhlala ziya kwakhiwa ukunqanda uxanduva lwerhafu, ngokolwazi olunikwe ababamangali.
Iifemu zamagqwetha kufuneka zifumane uninzi lwabamangali ukuba bavumelane nemimiselo yeendawo zokuhlala ukuze baqhubeke. Ngokwengcaciso enikezelwe kubamangali, iindawo zokuhlala ziyafunwa ngoku ngenxa yenani lomngcipheko onxulumene nokuqhubeka nokulandela izilingo ezongezelelweyo. Phakathi kwemingcipheko echongiweyo:
I-Bayer isoyikisile ngokufaka kwifayile njengongenamali, kwaye ukuba inkampani iyithathile loo ndlela, ukusombulula amabango e-Roundup kuya kuthatha ixesha elide kwaye ekugqibeleni kungakhokelela kwimali encinci yabamangali.
I-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA) wakhupha incwadi ku-Agasti ophelileyo uxelele uMonsanto ukuba iarhente ayizukuvumela isilumkiso somhlaza kwiRoundup. Oko kunceda ikamva likaMonsanto lokuphumelela enkundleni.
Ulibaziseko lwenkundla enxulumene no-Covid kuthetha ukuba izilingo ezongezelelweyo ze-Roundup akunakulindeleka ukuba zonyaka okanye nangaphezulu.
Ayisiyonto ingaqhelekanga ukuba abamangali abachophele amatyala amakhulu bahambe bedanile nangona bezibonakala ngathi zinkulu iindawo ekuxoxiswene ngazo kumatyala abo. Incwadi ye2019 "IiNtsebenzo zoThutho oluNinzi: Ukuxoxisana kwigumbi elingasemva kwi-Multidistrict Litigation”NguElizabeth Chamblee Burch, uSihlalo wezoMthetho u-Fuller E. Callaway kwiYunivesithi yaseGeorgia, wenza imeko yokuba ukunqongophala kweetsheki kunye nemali ezilinganayo kwizityholo zolwaphulo-mthetho zinika phantse wonke umntu obandakanyekayo ngaphandle kwabamangali.
UBurch ucaphula njengomzekelo wokumangalela i-asidi-reflux yeyeza iPropulsid, wathi ufumanise ukuba kwabamangali abangama-6,012 abangena kwinkqubo yokuhlawula, ngama-37 kuphela afumana imali. Abanye abafumani ntlawulo kodwa sele bevumile ukuwachasa amatyala abo njengemeko yokungena kwinkqubo yokuhlawula. Abamangali abangama-37 ngokudibeneyo bafumene ngaphezulu kweedola eziyi-6.5 yezigidi (phantse i-175,000 yeedola nganye kwi-avareji), ngelixa iifemu zomthetho ezikhokelayo zabamangali zifumene i-27 yezigidi zeedola, ngokweBurch,
Ukubeka bucala ukuba ngawaphi na abamangali abanokuthi okanye abangayi kuhamba nawo, abanye ababukeli bezomthetho kufutshane nesimangalo seRoundup bathi kulunge ngakumbi ukufezekiswa kokungalunganga komanyano nguMonsanto.
Phakathi kobungqina obuye bavela ngenxa yesimangalo ngamaxwebhu angaphakathi eMonsanto abonisa ukuba inkampani yenze uxwebhu lokupapashwa kwamaphepha enzululwazi abonakala ngobuxoki ukuba enziwe kuphela zizazinzulu ezizimeleyo; Inkxaso mali, kunye nokusebenzisana, amaqela angaphambili abesetyenziselwa ukuzama ukunyelisa izazinzulu ezixela ukwenzakala ngamayeza okubulala ukhula kaMonsanto; kunye nokusebenzisana namagosa athile ngaphakathi kwi-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA) ukukhusela kunye nokukhuthaza isikhundla sikaMonsanto sokuba iimveliso zayo azibanga ngumhlaza.
Amazwe aliqela kwihlabathi liphela, kunye noorhulumente basekhaya kunye nezithili zesikolo, baye bafudukela ekunqandeni i-glyphosate herbicides, kunye / okanye ezinye izibulali-zinambuzane ngenxa yokutyhilwa kwetyala leRoundup.
(Ibali laqala ukuvela Iindaba zezeMpilo yokusiNgqongileyo.)
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ulimo, B-iseli engeyiyo iHodgkin lymphoma, Bayer, IiSayensi zeZityalo zeBayer, umhlaza, inkundla, indawo, EPA, zolimo, FDA, ukutya, glyphosate, impilo, herbicides, IMonsanto, engeyiyo iHodgin lymphoma, inambuzane, Yisonge yonke, zokuhlala, ukubulala ukhula